အဝီဇိငရဲမှ ဖိတ်စာ...! - Neoxian City
ဒီနေ့တော့ "အဝီဇိငရဲမှ ဖိတ်စာ"ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဥ်လေးနဲ့ အနည်းငယ် ရေးသား မျှဝေချင်ပါသည်။
ကမ်ဘာလောကရှိ လူသားအားလုံးဟာ လူဆိုပြီး အမိဝမ်းထဲမှာ ရှိစဥ်ကတည်းက ဖြစ်တည်မှု အကောင်းအဆိုး လောကဓံတရား များကို စတင်ခံစားနေကြရပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအချိန်တွင် မိမိတို့မှ သိနိုင်မှတ်နိုင်စွမ်းမရှိသည့်အတွက် ဒါကောင်းသည်...ဆိုးသည်ကို မပိုင်းခြားနိုင်သေးပါ။
ထို့အတူ အမိဝမ်းမှ မွေးဖွားလာပြီးနောက် နို့ဆို့တတ်လာခြင်း...အစားစားတတ်လာခြင်း စသည်ဖြင့် တဖြည်းဖြည်း လူလားမြောက်လာပြီး အသိပညာ... အတတ်ပညာများ သင်ယူလေ့လာ ခဲ့ကြရပါသည်။
ထိုငယ်ရွယ်သော အချိန်မှာပင် အဆိုးနဲ့ အကောင်း ဆိုတာ သိသော်ငြားလည်း ပိုင်းခြားသိမှတ်နိုင်စွမ်းနည်းပြီး ကျင့်ကြံနိုင်စွမ်းမရှိသေးပါ။
ထိုအတွက်ကြောင့် ငယ်ရွယ်သောအချိန်များတွင် များသောအားဖြင့် အမှားများ လုပ်ဆောင်မိတတ်ကြပါသည်။အတွေ့အကြုံ နုနယ်သေးခြင်းကြောင်းလည်းကောင်း... မိမိလုပ်လိုက်သောအရာ၏ အဆုံးအထိ ဖြစ်နိုင်သော အကျိုးအပြစ် ဖြစ်တန်စွမ်းကို မတွက်ဆနိုင်သေးခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း... အမှားဘက်စီသို့ ရောက်သွားခြင်းမျိုးလည်း ရှိနေမှာဖြစ်ပါသည်။
လူ့ဘဝ အသက်နှစ်ဆယ်တန်းအထိ ဒီလို အဖြစ်အပျက်လေးတွေ အမှားလေးတွေ ကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်။ တစ်ချို့ သောသူများမှာတော့ သူတို့၏ အတွေ့အကြုံအရသော်လည်းကောင်း... ဇီဝကမ်မ ဖြစ်စဥ်အရသော်လည်းကောင်း... အသက်အပိုင်းအခြား အနည်းငယ် ကွာဟနိုင်ပါသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အသက်အရွယ်တန်း ၂၅ နှစ် ကျော်သွားပြီဆိုရင်တော့ အတော်လေး ရင့်ကျက်လာပြီး အမှားအမှန် အကောင်းအဆိုး ခွဲခြားနိုင်လာပြီး ဆင်ခြင်တတ်လာပါသည်။
ကောင်းသည့်အရာများအား များများလုပ်ဆောင်နိုင်လာပြီး...အမှားများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အဆိုးဖြစ်စေသောအရာများအား စတင် ရှောင်ရှားတတ်လာပါသည်။
ထိုသို့ လူလတ်ပိုင်းအရွယ်တွင်လည်း အကောင်း အဆိုးများနဲ့သာ ယှဥ်တွဲပြီး ခွဲခြားဆင်ခြင်း ဖြတ်သန်းနေကြရမှာ ဖြစ်ပါသည်။
ထိုမှတဆင့် အသက်အရွယ်တန်း ၄၀ ကျော်လာပြီဆိုရင်တော့ အသက်ကြီးသော လူကြီးအရွယ်သို့ ရောက်ရှိသွားပြီး လူ့လောကရှိ အကြောင်းအရာများအား အတော်နှံ့စပ်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ထိုကြောင့် မည်သည့်အရာကို မလုပ်ရန် နှင့် မည်သို့သောအရာကို လုပ်ဆောင်ကြရန် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များ ပြောဆိုပြီး လူငယ်များအတုယူရအောင် နေထိုင်ကျင့်ကြံရမည့် အချိန်ဟု ယူဆပါသည်။
သို့သော်လည်း လောကကြီးသည် အကောင်းအဆိုး ဒွန်တွဲနေသည့်အတွက် ထိုအသက်အရွယ်ရောက်သည်အထိ သိပင်သိသော်လည်း မဆင်ခြင်နိုင်သောသူများ ရှိနေကြအုံးမည် ဖြစ်ပါသည်။
လောကသဘာဝ နိယာမအရ အကောင်းရော အဆိုးရော ရောနှောရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပျမ်းမျှအားဖြင့် အသက်ကြီးသောသူများသည် အသိပညာ...အတတ်ပညာ... အတွေ့အကြုံများ... များပြားသူများဖြစ်သည့်အလျောက် ဝေဖန်ပိုင်းခြား ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်း ကောင်းမွန်သော သူများဖြစ်ကြပါသည်။
သို့ပါသောကြောင့် ထိုအသက်အရွယ်ကြီးသောအချိန်အထိ အကောင်းအဆိုး အမှားအမှန် အား ခွဲခြားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းမရှိပဲ လုပ်ဆောင်မိပါက မိမိလောက်မိုက်တဲ့သူ လောကမှာမရှိပဲ အဝီဇိငရဲက အဆင်သင့် နေရာပြင်ထားပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
အကောင်းနှင့် အဆိုးအား သိသာသိပြီး မိမိ၏ ကြီးမားသောအတ်တ အစွဲကြောင့် အမှောင်ဖုံးပြီး အမှားအမှန် မခွဲခြားနိုင်ပဲ လုပ်ဆောင်မိသွားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အချုပ်အားဖြင့် ဆိုသော် ငယ်ရွယ်၍ မသိသေးသောအချိန်တွင် အမှားများလုပ်မိပါက ငရဲမှ လွတ်ရာလွတ်ကြောင်းရှိနိုင်သော်လည်း သိသိကြီးနဲ့ လုပ်မိပါက ကြီးမိုက်ဖြစ်သွားပြီး ငရဲမှ ခွင့်လွှတ်မည်မဟုတ်ပါကြောင်း...ထိုသို့ မဖြစ်အောင် ကြိုးစားကျင့်ကြံကြပါလို့ ပြောရင်း အဆုံးသတ်လိုက်ရပါတော့သည်။
hive-122133 writing hell proofofbrain creativecoin neoxian archon trafficinsider ash blogtoken
ခေါင်းစဥ်ဖတ်ပြီး နဲနဲတောင်လန့်သွားတယ်။ 😅
မလန့်ပါနဲ့ဗျာ။ အဲသလို မျိုးတွေ ရှိတတ်လို့ ရေးတင်ရုံလေးပါ။ !PIZZA
uthantzin tipped htwegyi (x1)
myanmarkoko tipped uthantzin (x1)
htwegyi tipped uthantzin (x1)
uthantzin tipped myanmarkoko (x1)
ဟုတ်ပ...အရမ်းသိ အရမ်းတတ်သွားတော့ အတ်တကြီးပြီး အစွန်းရောက်သွားတာမျိုး...အမှောင်ဖုံးသွားတော့တာပေါ့
အမှန်တော့ အဲဒီဖိတ်စာက အသက်အရွယ် မရွေး အချိန်မရွေး ရောက်လာနိုင်တာမျိုးပါ.... မိမိဘက်က ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်ပြင်ထာလျင်တော့ ငရဲဖိတ်စာ ကနေ နတ်ပြည် ဖိတ်စာ လည်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ !PIZZA
အသက်အရွယ်မရွေး ရောက်နိုင်တာလည်း မှန်ပါတယ်အစ်ကို။ သို့သော်...!PIZZA
အရွယ်သုံးပါးလုံး ဖြစ်တတ်တာပဲပေါ့။ !PIZZA
ဇကောလောက်မှ ဇောက်မနက်တဲ့ ဟိုကြီးမိုက်ကြီးတစ်ယောက်တော့ ငရဲဖိတ်စာရောက်နေလောက်ပါပီလေနော.
သေချာတာပေါ့အစ်ကို ။အဲသလိုလူမျိုးတွေ တွေ့တွေ့နေရတော့ ဒီစာရေးဖြစ်သွားတာပါ...!PIZZA